के अब विद्यार्थीहरुले कलेजमा राजनीति गर्न पाउँदैनन् ! | Tungoon
के अब विद्यार्थीहरुले कलेजमा राजनीति गर्न पाउँदैनन् !
काठमाडौं । लामो समयदेखि अड्किएर बसेको स्ववियु चुनाव नहुने देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस वर्ष स्ववियु चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको छ ।
चुनाव फागुनमा गर्ने शैक्षिक क्यालेन्डर छ । तर, त्रिविले अहिलेसम्म मिति समेत घोषणा गर्न सकेको छैन । दलका नेता र विद्यार्थी संगठनसमेत स्ववियु चुनावका लागि सकारात्मक देखिएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस स्ववियु चुनावको पक्षमा छैन । ठुला विद्यार्थी संगठनको औपचारिकताका लागि मात्र स्ववियु चुनाव हुनु पर्ने बताउँदै आउका छन् ।
त्रिविले ६ महिनादेखि स्ववियु चुनावको तयारी गरको थियो । त्यसका लागि त्रिविले शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा निर्वाचन समिति बनाउनु पर्छ । विद्यार्थी कल्याण निर्देशनलयबाट शिक्षाध्यक्षसहित हुँदै त्रिविका उपकुलपति प्रा।डा। तीर्थ खनियाँसम्म निर्वाचन समितिले नाम सिफारिस भएको छ । कतिपयले शिक्षामा राजनीति हुन नहुने भएका हुनाले विद्यार्थीहरुको कलेजमा हुने राजनीति समाप्त गर्न चाहेको खुल्न आएको छ ।
Previousयस्तो थियो यूट्युबमा राखिएको पहिलो भिडियो
Nextकाम नगरी भुक्तानी लिनखोज्ने ठेकेदारलाई विप्लव माओवादीको साथ
सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती, यातना र बेपत्ताका हेर्न नपाउने
नेकपा एकताः पार्टी कार्यक्रम शून्य, कार्यकर्ता निराश
अमेरिकाको पक्षमा कांग्रेस